Fitsidihan’ny Mpianatra avy ao amin’ny faculté DEGS Toliara ny Antenimierandoholona – Sénat de Madagascar
Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny “voyage d’études” ny mpianatra lalàna kilasy fahaefatra ao amin’ny Faculté DEGS Toliara ny fitsidihana ireo Andrimpanjakana eto Madagasikara ka anisan’izany ny Antenimierandoholona. Ny zoma 12 aprily 2019 dia tonga nitsidika ny Antenimierandoholona ireo mpianatra ireo izay notarihan’i Professeur RABEMILA, mpampianatra Droit Constitutionnel, ary nihaona tamin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO niaraka tamin’ireo Loholona avy any amin’ny faritanin’ny Toliara.
Mpianatra miisa 29 , mianatra ao amin’ny sampana Droit public, Droit Privé, Droit judiciaire ary Andiany SANDRATRA no anarana entin’ireo mpianatra ireo.
Nandritra ny fotoana nihaonan’ ireo mpianatra tamin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona RAKOTOVAO Rivo no nanazavany ny asa sy andraikitra sahanin’ny Loholona ary ny anjara asan’ny Antenimierandoholona amin’ny fampandrosoana ny Firenena. Nambaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona fa “institution de Stabilité” ny Antenimierandoholona, mpitondra ny hetaheta avy amin’ny Vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana any amin’ny Governemanta.
Ny Antenimierandoholona hoy ihany izy dia misolotena ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, miara-miasa ary mifandray mivantana amin’ireo olom-boafidy amin’ny Kaominina.
Tao aorian’ny fifanakalozan-kevitra moa dia nanambara ny solotenan’ireo mpianatra fa izao fitsidihana izao dia mampitsiry nofinofy ka indray andro any dia izy ireo no handimby ireo Loholona eto anivon’ny Andrimpanjakana.
Nofaranana tamin’ny fitsidihan’ireo mpianatra ny toerana fivorian’ireo Loholona, ny efitrano fanaovana ny asam-baomiera ary ny efitrano fandraisana ireo vahiny manan-kaja moa ny fotoana.